गुठी सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्रोत : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गुठीहरुलाई नेपालको सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा चित्रण गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर नेपाली समाजले विपद् व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य योगदान दिन सफल हुँदै आएको बताए। सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘नेपालमा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षाको…
नबिल बैंकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं। नबिल बैंकले आफ्नो ३५औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। बैंकले गत श्रावण ४ गते नबिल बैंकको प्रधान कार्यालयमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा १२२ जना बैंकका कर्मचारीहरुबाट रक्तदान गरिएको थियो। ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालले देशमा…
आज घट्यो कि बढ्यो सुनको भाउ ? हेर्नुहोस् ...
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । हिजो प्रतितोला ५ सय रुपैयाँ घटेर ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज यथावत रहेको हो । आज बजारमा छापावाल सुन ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी…
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : आज बढ्यो कि घट्यो ? हेर्नुहोस् ...
काठमाडौं । आज (सोमबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ घटेको छ। आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ २५…
प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनिक
चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनीक गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आधारपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। आधारपत्रमा अल्पकालीन लक्ष्य २०७६/७७ देखि २०८०/८१, मध्यकालीन लक्ष्य २०७६/७७ देखि २०८७ र दीर्घकालीन २०७६/०७७ देखि २१०० सम्मका…
चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टकाे जग्गा सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस
काठमाडौं। संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले जग्गा भाडामा लिनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले आईतबार समितिको बैठकमा पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा सो उद्योगका लागि धादिङमा ५०…
नारायणीमा क्रुजसिप सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
नारायण अधिकारी चितवन। सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै नारायणी नदीमा रिभर क्रुजसिप (मिनी पानीजहाज) सञ्चालनमा आउने भएको छ। क्रुज दशैँअघि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। क्रुज सञ्चालन गर्ने राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले शनिबार यहाँ पत्रकार…
आज घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज आइतबार सुनको मूल्य ओरालो लागेको छ। शुक्रबार ५ सय रुपैयाँ बढेर ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेर उच्च रेकर्ड बनाएको सुनको भाउ आज ५ सय रुपैयाँले घटेको हो। आज बजारमा छापावाल सुन ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको…
विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति छ ? हेर्नुहोस् ...
काठमाडौं । आज (आईतबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ बढेको छ । आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६२…